रमेशको ‘ऐश्वर्या’ ले कहिले पाउँछ पालो ? « Ramailo छ
रमेशको ‘ऐश्वर्या’ ले कहिले पाउँछ पालो ?
अभिनेता रमेश उप्रेतीले निर्माण गरेको फिल्म ‘ऐश्वर्या’ को रिलिज मिति फ्लोर पस्दा दशैंलाई तोकिएको थियो । छायाँकन सकिंनै लाग्दा दशैंबाट तिहारमा सारियो । अब तिहारमा रेखा थापा र आर्यन सिग्देलको ‘रुद्रप्रिया’ अनि अनमोल केसीको ‘कृ’ प्रदर्शनमा आउने भएका छन् । अब के ‘कृ’ र ‘रुद्रप्रिया’ सँगै रमेश उप्रेतीको ऐश्वर्या पनि आउला ?
‘काम हुँदैछ ढुक्कले रिलिज गर्छु’ एक भेटमा निर्माता तथा अभिनेता उप्रेतीले भने, ‘तिहार नै भन्ने छैन् ।’ रमेशको भनाई लाई बुझ्दा ‘ऐश्वर्या’ तोकिएको मिति तिहारमा आउँला भन्नेमा शंका छ । दिवाकर भट्टराईको निर्देशन रहेको फिल्ममा रमेश उप्रेती र दीपिका प्रसाईंको मुख्य भूमिका छ भने नायिका केकी अधिकारी पनि महत्वपूर्ण भूमिकामा प्रस्तुत भएकी छिन् । फिल्मलाई निर्माण भने अभिनेता उप्रेती र अर्का अभिनेता अर्जुन श्रेष्ठ मिलेर बनाएका हुन् ।